Yini Oyaziyo NgeVanguard Movie - Ukuzijabulisa
Yini Oyaziyo NgeVanguard Movie
Yini ekhona kuMovie yeVanguard
Idethi Yokukhishwa Indaba Ye-movie ye-Vanguard
Jackie Chanungomunye wabalingisi abambalwa asebenze kanzima njengoba kumele anikeze abalandeli bakhe ubumnandi isikhathi eside. Kodwa-ke, ukuvela kwakhe kwakamuva kumabonakude kube okokuguga kwesikhulu esakhonjiswa ukuzokwengamela imibuthano esemthethweni ehlelekile kodwa engenakho ukunambitheka athandabuza ukuthi uyayijabulela. Iphrojekthi yakamuva kakhulu imbuyisa ndawonye nomqondisi uStanley Tong, asebenze naye futhi evala kusukela kuSupercop cishe emashumini amathathu eminyaka edlule. UJackie Chan ungomunye wosaziwayo abambalwa osebenze kanzima njengoba kumele agcine ababukeli bejabule ngaso sonke isikhathi.
Kodwa-ke, ukuvela kwakhe kwefilimu muva nje kube okomholi wezwe osekhulile osakhonjiswa ukuzokwengamela imibuthano esemthethweni ebizayo kodwa engenangqondo athandabuza ukuthi uyayijabulela. Iphrojekthi yakamuva kakhulu imbuyisa ndawonye nomenzi wefilimu uStanley Tong, asebenze naye ngezikhathi ezithile kusukela kuSupercop cishe emashumini amathathu eminyaka edlule.
Funda kabanzi:- AMAGENDI AKUSASA USUKU LOKUKHIPHA NGESIKHATHI 7 KANYE NEZIBUYEKEZO EZININGI
UStanley Tong wabhala futhi waqondisa ifilimu ye-2020 yaseShayina ye-action-adventure Vanguard , okulingisa kuzo uJackie Chan, uYang Yang, noMiya Muqi. Sekungokwesithupha u-Chan esebenza noTong. IVanguard bekumele ishicilelwe eChina ngoJanuwari 25, 2020, nokho yahlehliswa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Kamuva yashicilelwa e-China ngoSepthemba 30, 2020, e-United States ngoNovemba 20, 2020, nase-India ngoDisemba 25, 2020. Abagxeki batusa ukusebenza kukaJackie Chan kanye nokulandelana kwesenzo nomculo osesithombeni, kodwa bakugxeka ukulandisa. , ukuhlela, kanye nobude besikhathi.
Funda kabanzi:- UYAYAZI INKOSI YABACHATA?
UMaasym, umholi wenhlangano yabashokobezi iBrothers of Vengeance, uphoqe u-Qin Guoli, u-accountant waseChina osebenza e-United Kingdom, ukuthi axhase ngezinhlelo zakhe. UMaasym wabulawa empini yamasosha aseMelika ngemuva kokuthi uQin eluma indlebe eScotland Yard, kodwa indodana yakhe u-Omar yaphunyuka futhi manje isifuna ukuthola izandla zayo emalini kayise, eyaziwa nguQin kuphela.
Iqembu lamasosha e-Arctic Wolves liqashwe ngu-Omar ukuthi libambe u-Qin nonkosikazi wakhe omusha u-Meiwei emikhosini Yonyaka Omusha yase-London Chinatown. Ama-ejenti u-Zhang Kaixuan, u-Lei Zhenyu, noMiya Muqi athunyelwa yi-Vanguard, inkampani yezokuphepha yamazwe ngamazwe enikezwe umsebenzi wokuvikela u-Qin. Ngemva kokuphela ngempumelelo kwemishini, u-Qin ucela ukuthi umqondisi weVanguard u-Tang Huanting avikele indodakazi yakhe uFareeda, ose-Afrika manje, ngaphambi kokuba u-Omar amsebenzise ngokumelene naye.
UTang, uLei, noMiya baya e-Afrika befuna i-Fareeda, kodwa kufanele futhi babhekane ne-Arctic Wolves kanye neqembu elizingela ngokungemthetho elibuthwe njengesipele. Phakathi nezinxushunxushu zokuhilizisana kwasekuqaleni, uLei noFareeda bahlukaniswa neqembu lonke futhi babalekela ehlathini eliseduze, okuphoqa uTang noMiya ukuba bazingele ngezinyawo, besizwa ukulandelela ngesathelayithi okunikezwa yindlunkulu yaseVanguard.
U-Tang noMiya baphinde bahlangana nabangane babo futhi bahileleka emfuleni ophithizelayo ngemoto egijima emanzini kanye nama-jet skis, okugcina ngokuthi u-Tang noMiya babhajwe futhi u-Lei noFareeda bayaboshwa. U-Broto, umholi we-Artic Wolves, uphakamisa ukuthi ahwebe abathumbi bakhe nge-Qin, okuyinto uQin ayamukela kalula.
I-Vanguard yadutshulwa ezindaweni ezihlukahlukene emhlabeni wonke, kusukela ezindaweni ezishiwo ngenhla kuya eZambia naseNdiya, nakuba kungacaci ukuthi sikuphi. Amashothi asetshenziswe kakhulu ngemuva kokukhiqizwa, i-janky CGI, kanye nesitayela esicishe sibe nemibala egqamile kuguqula lolu hambo lwasesinema lube yipaki eyodwa yetimu yesenzo esikhulu.
Leso senzo sinamandla, uma ngezinye izikhathi singagculisi, futhi u-Chan uyena kuphela ongakwazi ukusidlalela ukuhleka. Noma kunjalo, inkanyezi eneminyaka engu-66 ayiyona into egxile kakhulu kulo mdlalo. Njengoba u-Yang Yang onenkokhelo yesibili enza okwengeziwe ngokuphakamisa kanzima, ukudubula, kanye nokukhahlela, isikhundla sakhe sizizwa njengomshwalense osobala wehhovisi lamabhokisi aphesheya kwezilwandle.
Funda kabanzi:- AMAMINININGWANE: UKUKHULA KWE-GRU IFILM YAMAHLAYA EKHOMPUTER-Animated.
Bekumele yethulwe eChina ngoJanuwari 28, 2020, kodwa yahoxiswa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngenxa yokuhlehliswa kombukiso wokuqala wefilimu e-China, ukukhishwa kwetiyetha e-Singapore nase-Philippines kulibaziseke. Ngenxa yokugqashuka kwe-COVID-19 e-China, imidlalo yetiyetha eminingana yakhanselwa, futhi imithetho ethile ivimbela noma iyiphi ifilimu yase-China ukuthi ikhishwe ngaphandle kwe-China ngaphambi kokukhishwa kwayo ekhaya.
Kwamenyezelwa ngoSepthemba 1, 2020, ukuthi le filimu izokhishwa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ngoSepthemba 30, 2020. Ngo-Okthoba 8, 2020, inguqulo yesiNgisi yefilimu yakhululwa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini kulo lonke elase-United Arab Emirates nakwezinye ezimbalwa. amazwe akhelene. Amalungelo aseNyakatho Melika athengwe ngabakwa-Gravitas Ventures, futhi ifilimu yakhululwa ngoNovemba 20, 2020, kumatiyetha ezweni lonke, okuhlanganisa ama-drive-ins kanye ne-IMAX.
Funda kabanzi:- INGABE UYAFUNA UKWAZI NGABALINGISI KANYE NEZIBUYEKEZO ZAkamuva ZE-HOUSE OF HO SEASON 2?
Emasontweni ayo amabili okuqala ezinkundleni zeshashalazi zaseShayina, iVanguard yenza ama-yuan ayizigidi ezingu-246 (amaRandi ayizigidi ezingu-37). Ngesikhathi seholide le-Golden Week likazwelonke, lenze abantu abampofu kakhulu kunabo bonke abanye osomabhizinisi bendawo. Ngempelasonto yawo yokuqala e-United States, lesi sithombe senze imali engu-$400 000 ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ezingu-1 375 emadolobheni angu-178.
Ingabe kufanele ubukele i-Jungle Cruise? Ake Sithole
I-Protégé: Indaba Yombulali